बन्धुराज न्यौपाने स्मृतिग्रन्थ विमोचन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बन्धुराज न्यौपाने स्मृतिग्रन्थ विमोचन
२०७७ चैत्र १४, शनिबार २१:३५ गते
भरतपुर । रत्ननगर–१२, घेघौली निवासी राजनीतिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन्धुराज न्यौपानेको स्मृति दिवसका अवसरमा प्रकाशित ‘बन्धुराज न्यौपाने स्मृतिग्रन्थ’को शनिबार विमोचन गरिएको छ ।
न्यौपाने कल्याण समाज नेपाल चितवनका अध्यक्ष रामहरि न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न विमोचन कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव वामनप्रसाद न्यौपानेको प्रमुख अतिथि रहेका थिए । समारोहमा पूर्वसचिव न्यौपानेले न्यौपानेहरुको वंशावलीबारे चर्चा गर्दै स्व. बन्धुराज न्यौपानेको स्मृतिग्रन्थ भावी पुस्ताको लागि दस्तावेज बन्ने बताए ।
समारोहमा स्व. बन्धुराजका हितैसी मित्र कांग्रेस नेता एवं पूर्वसांसद् भीमबहादुर श्रेष्ठले बन्धुराज पञ्चायतकालदेखि एउटा निडर, निर्भीक एवं सत्य र जनताको पक्षमा अडान लिने व्यक्ति रहेको बताए । बन्धुराजले देखाएको मार्गलाई अनुशरण गर्दै विविध क्षेत्रमा रहेका न्यौपानेहरुलाई राजनीतिमा पनि आउनसमेत उनले आह्वान् गरे ।
यस्तै, बन्धुराजको जीवनी र कृतिबारे प्रदेश सांसद् बलराम पौडेल, डा. भक्तमान श्रेष्ठ, पं नारायण न्यौपाने, यमुनाप्रसाद न्यौपाने, हरिप्रसाद न्यौपाने, मेघनाथ न्यौपाने, भीष्मराज न्यौपाने, कृष्णराज न्यौपाने, केदार तिमिल्सिनालगायतले चर्चा गरेका थिए । बन्धुराजका भाइ तीर्थराज न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए ।